DEG DEG+XOG: M/weyne Deni oo deg deg ugu duulaya Addis Ababa & Sirdoon ay ka wada hadlayaan Doorashada 2021-ka.
October 24, 2020 NEWS 16
ADDIS ABABA(P-TIMES) – Warsidaha PuntlandTimes ayaa ogaaday in 48 saac ee nagu soo wajahan Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni u safrayo magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya, isagoo ay halkaas hadda uga horeeyaan qaar kamid ah xubnaha golihiisa wasiiradda, gaar ahaana xubnaha ay aadka iskugu dhaw yihiin, waxaana safarka uu la xariira gorgortan siyaasadeed oo kuwajahan xagga doorashooyinka Soomaaliya.
Warsidaha Puntlandtimes ayaa ogaaday in Madaxweynaha Puntland Siciid Deni uu halkaas shir gaar ah kula yeelan doono qaar kamid ah madaxda ugu sareysa Sirdoonka Soomaaliya, gaar ahaana Agaasimaha Hay’adda NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, oo ay ka wada hadlayaan doorashooyinka.
Isku keenida kulankan ayaa la xariira arrinta doorashada, waxaana la rumeysan yahay in ay ka shaqeyeen Sirdoonka Itoobiya oo dadaalo ku wajahan doorashooyinka Soomaaliya waday mudooyinkii u dambeeyey.
Xogaha ayaa daaha ka rogaya in Madaxweyne Deni qorsheynayo safarkiisan in uu galinka dambe ee 25-ka bishan oo ku beegan berrito u dhoofo Addis Ababa, iyadoo aysan wehlin doonin cid katirsan laamaha kala duwan ee Puntland.
Deni ayaa kasoo laabtay Kenya & Imaraatka Carabta, waxaana kulankiisa Addis Ababa ee aadida cusub ay muujin kartaa walaac ku wajahan in aysan Dubia waji wanagsan oo siyaasadeed lasoo kala laaban, waxaana arrintan ay qeyb ka noqonaysaa loolanka doorashada.
Madaxweyne Deni ayaa kamid ah siyaasiinta Soomaalida ee hadda u janjeera dhanka Imaaratka Carabta, wuxuuna aad uga soo horjeeday dawladda Qadar, sidaas oo kale Taliyaha Nabadsugidda Fahad Yasiin ayay is hayeen, Isheynta ayaa ka dhalatay sannadkii 2019kii doorashadii Puntland oo uu Siciid Deni taageero ka raadiyey dhinaca Dawladda Faderaalka, balse ay ka jeedsadeen oo ay taageereen musharax kale.
Itoobiya ayaa hadda saameyn ku leh arrimaha doorashooyinka Soomaaliya, iyadoo ay dhawaan Addis Ababa gaareen wafdi kasocday Jubbaland oo uu hogaaminayay Madaxweyne kuxigeenka Maxamuud Sayid Aden, uuna ku jiray saaxiibka dhaw ee Axmed Madoobe ahna wasiirka Maaliyadda Cabdirashiid Jirde.
Warar hoose ayaa cadeynaya in ay Sirdoonka Imaaraatka Carabta ku cadaadinayan 3 siyaasi oo uu kamid yhay Madaxweynaha Puntland in ay dib ugu soo laabtan Dubia 27-ka bishan oo ay naga xigaan sadex maalmood oo qura.
Nin siyaasiya oo dhowaan waraysi bixiyey baa hadaladiisa waxaa ka mid ahaa, oo aad iisoo jiitay, “siyaasiyiinta Soomaalida maantu way ku faanaan oo ku baratamaan QAA’INUL WADANINIMADA, halka caalamka oo idilna ay ka tahay daldalaad!”
Qaa-inulwaddan waxaa ah farmaajo oo ay Aammintay ummadda soomaaliyed, farmaajo wuxuu ku tala galay inuu soomaaliya xoog ku haysto 21 sano, waana lala fahmay, dhibkii iyo qiyaanadii uu siyaad barre dalkaan u gaystay ayaa cid walbo ogtahay si taxaddar leh ayaa loola socday damaca doqonnimada ah ee farmaajo, waxaad xasuusataan mar uu farmaajo itoobiya ka soonoqday uu shir jaraaid uu qabtay wuxuu noosheegay inuu sooxiray kannaaladii itoobiya loo mari jiray, oo uu ka waday waxaan kala jaray xiriirkii maamulada soomaalida iyo itoobiya, waxaa la yaab leh farmaajo muxuu u taraa ama uu ku caawiya maamulada dalka waa waxbo haddana wuxuu Leeyahay caawimaaddi ay meelaha kale ka heli jireen ayaan ka sooxiray, itoobiya maamulada waxay kala shaqaysa a Xagga ammaanka qaas ahaan hub ay isaga dhiciyaan shabaab ayeey siisaa, laakiin farmaajo wuxuu taro iska daaye isagaaba dhibaato ku ah maamulada dalka tusaale waxaa noogu filan waxa gedo ka socda. Madaxweyne dani uma uu joojinaayo ninka daqonka ah ee wax mätbara ah waana uu dulmaeayaa isaga iyo waxa la shaqeeya a waana been waxa uu ninkaan sooqoray ee uu Leeyahay fahad ayuu la kulmayaa kkkkk Dr dani markii uu xamar joogay waxbadan ayuu fahad codsiyo soodirsaday inuu la kulmo mudane dani laakiin waa uu diiday ma hadduu adis ababo u aadayaa ninkaas aan waxbaba la joogin.
Qatar, Kenya, Ethiopia, Emirates meeday SOOMAALI MARYOOLEY??
CABDIRAHMAN MAHAMED FARAH says:
Waxay ilatahay tagitanka dani in uusan waxba sookordhineyn ee waxaan leyahay hala taageero dowlada
MDX.. Dani muxuu ka doonay Adis -ababa.. sheekakaa waa in dhug loo yeesho, la baaro.
Dani iyo , Axmad abii Oromo , Amaxaar .. hashiis qorsoodi ah ayaa dhex maray,, waa sida ay ila tahay.. ma hubo.. Ciyaaaaloow.
Farmaajo , ama Xaar maajo. waxa uu ku faanaa Axamad abii Oromo , Amxaar .. saaxiib ayaan nahay .. dadka ha la yaabin adeer.
Siyaad bare.. AKA . Afweyne .. Minnguste ayuu kula heshiiiyay sidii loo dumin lahaa Zoomalila.. Taariikhdi way is qoraysaa.
Zoomaalida caruurta soo karaysa, waxaa loo sheegaa Kenaya ayaan la dagalaamaynaa col ayaan nahay Ethiopia walaalo ayaan nahay, waxaa wada kiwii ku naaxay maamulkii faasidka ahaa ee Siyaad bare . Afweyne.
waa Ciyaalkii Kacaanka.. waxa uu dul taagan yahay Xabaashii Siyaad bare , Afweyne . oo ku bakhtiyay bulaacad ku taala Nayjeeriya , wax Taariikh ahna aan ku dhex lahayn Zoo maali.
Siyaad bare .. Afweyne .. waa kii Qaxootiga kaa dhigay, dhulkaaga gubay. Dawlad si dimoqoraadi loo soo doortay bur buriyay..masiibada haysata Zoomaaliad mas,uulka ka ah..
Ethiopia & Kenya .. waxaa ka dhexeeya heshiis da weyn Strategy ah , ku saabsan in aanay marnaba suurto gal noqon wax la yidhaado 5 Soomaali ama , Soomali weyn. markaa hadaad Kenaya la heshiiso ama Ethiopa u cararto adigaa lu go,aya.
Farmaajo.. Axamad Abii Oromo . Amaxaar .. ayuu la heshiiyay si uu kursiga Villa Wardhiiglay u sii fadhiyo .
Daba dhilifnimo Cabdilaahi yuusuf aya eedaya siyaasiyiinta maanta inarkada qadar itoobiya iyo Kenya uadeegaya waxa iman doonta in maalin dhawo midwalaba halkaa lagu xidho
Dhulgub Afweyne waa ninka dhigey Somalia meesha ay maanta taallo. Isticmaarkii ingiriiska iyo kii Fashiistihii Talyaaniga Booy iyo Jaajuus ayuu ahaa. Wuxuu ahaa fuley, jaahil, foolxun oo aan xishoon. Waxaa uu laayey Somali nooc ksata leh, askar, wadaado, ardey, beeraley iyo xoolo dhaqato. Gees ka gees Somalia ciidan ayuu ku saarey oo laayey Somalidii daganeyd. Laba Allifle Mangiste ayaa ka adkaadey Akhiiran waa la iska ceshey, markii uu arkey in xaalku ku xunyahey ayuu Nigeria uu cararey halkaan ayuu ku BAKHTIYEY.